Ityotyombe leClassic Wye River Beach
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguPhoebe And Dylan
"Ipanema" lityotyombe elincinci le-50s Aussie fibro beach. I-compact kodwa intle. Ngubani ofuna indlu enkulu xa unolwandle njengebala lakho lokudlala, kunjalo, akunjalo? Ityotyombe lethu elincinci lidibanisa umtsalane ongathandekiyo kunye nomxube ochanekileyo wobuntofontofo bale mihla ukulungiselela ukubaleka okugqibeleleyo. Seta imizuzu nje ukusuka elunxwemeni, ikhefi kunye ne-pub, kunye nembono ethe ngqo yolwandle ngemithi yeentsini zemveli.
I-Ipanema yityotyombe elincinane lase-Australia le-50s le-fibro elunxwemeni, lisandula ukulungiswa ukuze linike intuthuzelo enkulu kunye nobunye ngelixa lisamkela umtsalane walo ongaqhelekanga.
Le ndlu ibandakanya amagumbi amabini okulala (1 ibhedi yokumkanikazi kwindawo nganye), ikhitshi, igumbi lokuhlambela, indawo yokuhlala evulekileyo kunye nedesika enkulu enombono wolwandle. Ilungiselelwe izibini okanye iintsapho ezincinci.
Nceda uqaphele ixabiso le-BYO yelinen yeebhedi kunye neetawuli. Ukuqeshwa kwelinen kuyafumaneka ngentlawulo eyongezelelweyo, kodwa isaziso siyafuneka. Nceda ubuze ngokubhukisha.
Kukwakho ne-bungalow encinci, nangona kunjalo oku kusaqhuba umsebenzi othile kwaye ikakhulu isetyenziselwa ukugcina kwethu.
Ityotyombe limiselwe ibhloko enye emva ukusuka eGreat Ocean Road kumgama ohamba lula wokuya elunxwemeni, iWye General Store kunye neCafe kunye neWye Beach Hotel.
Indawo ye-Ipanema ithetha ukuba uhambo oluya ekhaya lufutshane kwaye uthambeka alukho kakhulu (ngemigangatho yoMlambo iWye, kunjalo!), ukanti indlu isahleli phezulu ngokwaneleyo ukubonelela ngembono yolwandle ngeentsini ezintle. Xa sele ungaphakathi uya kuziva ngathi uhlala phezu kwemithi.
Njengoko uza kubona kwiifoto, iyadi kunye neendawo ezikufutshane nazo zisekhaya ezininzi zezinye izilwanyana zasendle, kubandakanya i-echidnas, i-kookaburras, i-cockatoos kunye ne-parrots.
4.71 ·Izimvo eziyi-147
4.71 out of 5 stars from 147 reviews
4.71 · Izimvo eziyi-147
I-Wye River inamashishini amabini kuphela orhwebo ongenakuphoswa: iWye River General Store & Cafe kunye neWye Beach Hotel (i-pub). Njengoko ithamsanqa linokuba nalo, zombini zimnandi kwaye zithetha ukuba awudingi ukuba umke edolophini uyokufumana ikofu enkulu, isiselo okanye isidlo.
Icafe ibonelela ngeyona ikofu ilungileyo kunye nesidlo sakusasa kulo mmandla, ivenkile ithengisa eyona ntlama intle eyenziwe yindlu kwaye i-pub ibonelela nge-pub grub esemgangathweni ecaleni kweebhiya zasekhaya kunye newayini, ngenjongo yokukhuphisana nayo nayiphi na enye.
Umbuki zindwendwe ngu- Phoebe And Dylan
We live in Melbourne, Australia but our hearts belong in Wye River, along the Great Ocean Road where we own a classic little Aussie beach shack. We'd spend every weekend there ourselves if we could but the next best thing is being able to share it with likeminded people who appreciate its charm, via Airbnb of course. We have a gorgeous baby boy who we are hoping will share our love of travelling (especially road trips!), live music and good food. When travelling, we love seeking out the best local food and coffee, exploring vintage stores and op shops, and admiring interesting architecture.
We live in Melbourne, Australia but our hearts belong in Wye River, along the Great Ocean Road where we own a classic little Aussie beach shack. We'd spend every weekend there ours…
Sihlala eMelbourne, kodwa sinosapho kunye nezihlobo ezikufutshane. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye uhlangabezana nazo naziphi na iingxaki ngexesha lokuhlala kwakho, siyafumaneka ngamaxesha onke ngefowuni okanye nge-imeyile.
Incwadi yetyotyombe inika iingcebiso ezininzi kunye neengcebiso malunga neendawo esizithandayo zokutya, ukusela, ukuhlola kunye nokuzibandakanya kwindawo ekufutshane nangaphaya.
Sihlala eMelbourne, kodwa sinosapho kunye nezihlobo ezikufutshane. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye uhlangabezana nazo naziphi na iingxaki ngexesha lokuhlala kwakho, siyafuman…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wye River